रिलायन्स लाइफको पहिलो कारोबार ३२२ रुपैयाँदेखि शुरु, कम्पनीको शेयर खरीदमा उच्च माग
भदौ २३, काठमाडौं । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयर कारोबार मंगलवारदेखि शुरु भएको छ । सोमवार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको उक्त कम्पनीको शेयर कारोबार प्रतिकित्ता रू. ३२२ मा खुला भएको हो ।
स्पेशल प्रि–ओपनिङ सेसनमा उक्त कम्पनीको ५० कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । प्रि– ओपनिङ सेसनमा कारोबार म्याच भएसँगै नियमितसेसनमा कम्पनीको कारोबार शुरु भएको हो ।
नियमित सेसनको कारोबार खुला भएको ३० मिनेट जाँदा उक्त कम्पनीको १७ लाख ८७ हजार ५४६ कित्ता शेयर खरीदको माग रहेको छ । यस कम्पनीको शेयर खरीदका लागि रू. ३२४ देखि रू. ३२८ सम्मको मूल्यमा खरिद अर्डर भएको छ । यस अवधिसम्म विक्री कर्ता भने कोहि देखिएका छैनन् ।
उक्त कम्पनीले भदौ ४ गतेदेखि ८ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि ६३ लाख कित्ता आईपीओ विक्री गरेको थियो । नेप्सेले उक्त कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि प्रतिकित्ता न्यूनतम रू. १०७ दशमलव ५९ देखि रू. ३२२ दशमलव ७७ मूल्य रेञ्ज तोकेको छ ।
नेप्सेले पहिलो कारोबारका लागि कम्पनीको नेटवर्थको तीन गुणासम्मको मूल्य रेञ्ज तोक्ने गरेको छ । गत असार मसान्तसम्म कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ११० दशमलव ४५ रहेको छ ।